कमरेडहरु ! नैतिकता बाँकी छ भने बालुवाटारमा पार्टी बैठक नगर
काठमाडौं, १९ साउन । कतिपय ससाना घटनाहरूको ठूलो अर्थ र सन्देश हुन्छ । झट्ट हेर्दा लाग्दछ– कुन ठूलो कुरा हो र ? तर, त्यसका अन्तर्यहरु गम्भीर हुन्छन् ।
त्यस्तै कुरा हो– नेकपाको बारम्बार हुने बालुवाटार बैठक । बालुवाटार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास हो । उनको निजी निवास बालकोटमा छ । पार्टी अध्यक्ष ओलीको बालकोट निवासमा बैठक राखे बैठकमा भाग लिनुपर्नेहरुलाई कति सहज वा असहज हुन्छ, तर अरुका लागि त्यो मतलबको बिषय हुँदैन । नेकपाका नेता कार्यकर्ताको भने मतलबको विषय बन्न सक्छ ।
आफ्नो निजी निवासको प्रयोग केके काममा गर्ने ? त्यो निर्णय लिन अधिकार ओलीसँग हुन्छ । तर कुुनै पार्टीको बैठक, चाहे त्यो सत्तारुढ दलकै किन नहोस्, बारम्बार सरकारी निवासमा गर्नु, त्यो पनि सरकारी दानापानी खर्च हुने गरी– यो लोकतान्त्रिक संस्कार र आचरण हैन ।
किन त ? किनकी दलीय व्यवस्थामा सरकारी निवास कुनै एक दलको हुँदैन । मानौं कि विपक्षी नेपाली कांग्रेस, जसपा, राप्रपा वा विवेकशील–साझा पार्टीले बालुुवाटारमा पार्टी बैठक गर्न चाहे, के सरकारले दिन्छ ?
कि त दिनु पर्छ । कि त त्यहाँ नेकपाको बैठक बन्द गर्नुपर्छ । किनकी लोकतन्त्र समानताको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ । बहुदलीय लोकतन्त्रमा दलहरुको कानुनी हैसियत, सार्वभौमसत्ता र आत्मसम्मान समान हो भने कि त बालुवाटारमा सबै दलको बैठक गर्न पाउने र सरकारी दानापानी उपलब्ध हुने प्रचलन हुनु पर्‍यो कि त बालुवाटारमा नेकपाले पनि आफ्नो बैठक गर्नु भएन ।
यो विषय बारम्बार उठिरहेको छ । तर, कसैले उत्तर दिइरहेको छैन । यहाँनेर लोकतन्त्रको अर्को सिद्धान्त खण्डित भएको छ, त्यो हो– जवाफदेसहिताको सिद्धान्त । राज्य वा राज्यको सम्पत्तिको प्रयोगसँग सम्बन्धित कुनै प्रश्न उठेमा त्यसको सम्बन्धित निकायले दिनु पर्दछ ।
कि त भन्नुपर्छ प्रधानमन्त्री कार्यालयले– बालुवाटार सार्वजनिक स्थल हो, यहाँ जुनसुकै पार्टीले आफ्नो बैठक गर्न सक्नेछन् । कि त भन्नुपर्छ– यो प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास हो, यहाँबाट सरकारी कामकाज हुन्छ, कुनै दल विशेषको बैठक गर्ने ठाउँ यो हैन । तर, यस्तो कुनै स्पष्टीकरण अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले दिएको छैन ।
यसको अर्थ हो– नेकपा पार्टी र राज्यको फरक वैधानिक हैसियतबारे अस्पष्ट र अलोकतान्त्रिक चिन्तन राख्ने दल हो । एकदलीय साम्यवादी शासनमा यस्तो हुन सक्दछ । किनकी त्यहाँ पार्टी नै राज्य र राज्य नै पार्टी हुन्छ । पार्टी र राज्यबीचको भिन्नता छुट्टिन्न ।
हिजोको सोभियत संघ वा पूर्वी युरोप त्यस्तै थियो । त्यहाँ राज्य र पार्टी बीच भेद थिएन । आजको चीन र उत्तर कोरिया त्यस्तै हुन् । त्यहाँ राज्य र पार्टीबीच भेद छैन । ‘पार्टीं–राज्य’ वा ‘राज्य–पार्टी’ को अवधारणामा चलेको शासनसत्तामा यस्तो प्रश्न नै उठाइन्न । किनकी त्यहाँ लोकतन्त्र हुँदैन ।
तर जहाँ लोकतन्त्र हुन्छ– त्यहाँ पार्टी र राज्यलाई फरक-फरक अस्तित्व मानिन्छ । निश्चय नै पार्टी र राज्यबीच पुलको काम गर्ने संसदीय दल हुन्छ । संसदीय दलको बैठक सिंहदरबार वा बालुवाटारमा हुनु स्वभाविक हो ।
तर पार्टी केन्द्रीय समितिको औपचारिक बैठक भने पार्टी कार्यालय मै वा पार्टी कार्यालयले तय गरेको ठाउँमै हुनुपर्दछ । र, त्यहाँ हुने दानापानीको खर्च सरकारी कोषबाट हैन, पार्टी कोषबाट गरिनुपर्दछ । यो नै लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता हो । यदि नेकपा यो मान्यता तोड्न उदत्त हो भने त्यो उसको लोकतन्त्रविरोधी राज्य–पार्टीवादी अधिनायकवाद सोचको परिचायक हो ।
एकपटक हैन, दुईपटक हैन, नेकपाले बारम्बार बालुवाटारमा बैठक गर्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्थालाई हेरेर उनलाई भाग लिन सजिलो होस् भनेर त्यहाँ बैठक राखेको पुष्टि हुँदैन । त्यस्ता बैठक पनि बालुवाटारमै हुने गरेका छन्, जसमा स्वयम् प्रधानमन्त्री ओलीले भाग लिँदैनन् वा बहिष्कार गर्दछन् ।
ओलीको स्वास्थ्य अहिले बालुवाटार बाहेकका बैठकमा भाग लिन नसक्ने अवस्थामा छैन । उनी विभिन्न कार्यक्रमहरुमा गएकै छन् । भाषणभूषण गरिरहेकै देखिन्छन् ।
मानौं कि प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यकै कारण बालुवाटारमा बारम्बार बैठक राखिएको हो, त्यसो हो भने– प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले त्यो कारण खुलाएर विज्ञप्ति निकाल्न पर्छ र नागरिकसँग क्षमायाचना गर्नुपर्दछ । भन्नुपर्छ– ‘प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यको कारण नेकपा पार्टीको बैठक बालुवाटारमै गर्नुपर्ने व्यहारिक बाध्यता भएको हुँदा सरकार नागरिकप्रति क्षमायाचना गर्दछ ।’
यदि सरकारले यसरी स्पष्ट गर्छ भने अनि बल ओलीको कोर्टमा आउँछ । पार्टी कार्यालय पनि जान नसक्ने अवस्थामा कुनै पद धारण गरिराख्नु राजनीतिक नैतिकताको प्रश्न हुन्छ कि हुँदैन ? यो प्रश्नबारे ओलीले सोचून् । नेकपाका सकल दर्जाका नेता कार्यकर्ताहरुले सोचून् ।
तर, सरकार यो बिषयमा बारम्बार मौन छ । हुँदाहुँदा पार्टीका एक उपल्लो नेता वामदेव गौतमले सहमतिका ६ बुँदामध्ये एक बुँदा आइन्दा ‘पार्टी बैठक पार्टी कार्यालयमा हुनुपर्नेछ’ बनाए ।
गौतमले यो बुँदा उल्लेख गर्नुको अर्थ प्रधानमन्त्री ओली पार्टी बैठक पार्टी कार्यालयमा गर्न समेत राजी छैनन भन्ने प्रष्ट संकेत हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्नै पार्टी कार्यालयसँग किन यति धेरै मोहभंग भएको हो ? स्रोत साधनको अभाव भनौं नेकपाका दुई-दुईवटा आफ्नै स्वामित्वका पार्टी कार्यालय छन् । बैठक खर्चको जोहो भनौं नेकपा आफैमा सबैभन्दा धेरै स्रोत साधन हुने पार्टी बनेको छ । फेरि लोभ के को हो ?
निश्चय नै यो लोभ वा व्यहारिक जटिलताको हैन, सोचको बिषय हो । यो राज्य–पार्टीवादी सोचको अभ्यास हो । सन् १९९० अघिका संसारका सबै कम्युनिष्ट पार्टीहरु यस्तै हुन्थे ।
आफूलाई बहुदलीय जनवादी भने पनि प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीमा अधिनायकवादी साम्यवादी सोच अझै जीवित छ भन्ने प्रमाण हो यो । सत्तामा भएको पार्टीले पार्टी हितका लागि राज्यशक्ति र स्रोतको प्रयोग गर्ने अधिकार राख्दछ भन्ने चिन्तनबाट यस्तो अभ्यास विकसित हुन्छ ।
नेकपा स्थायी समितिको बालुवाटार बैठक आठौंपटक स्थगन भई अहिले अनिश्चित बनेको छ । एक चौथाई केन्द्रीय समितिले केन्द्रीय समिति बैठकको माग गरेका छन् । यो बैठक बोलाईने सम्भावना झनै न्यून छ । नेकपाको पार्टी जीवन साँच्चै अलोकतान्त्रिक बनेको छ अहिले ।
विधि, पद्धति, प्रक्रिया र मूल्यमान्यता नै संकटमा परेको पार्टी नेतृत्वलाई बालुवाटार बैठक स्थानबारे चर्चा गर्नु पक्कै निरर्थक होला । तर, नेकपाका लागि निरर्थक देखिने धेरै चिजहरु अझै देश, जनता र लोकतन्त्रका लागि मूल्यवान हुन सक्दछन् ।
लोकतन्त्रमा कुनै पनि बिषय सानो वा ठूलो हुँदैन । लोकतन्त्रको मान्यता, मर्यादा र सीमा महत्वपूर्ण हुन्छ । लोकतन्त्रको अर्थ र उपदेयता महत्वपूर्ण हुन्छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिको सन्देश महत्वपूर्ण हुन्छ ।
कमरेडहरु ! आइन्दा बालुवाटारमा पार्टीको बैठक नगर । त्यस्तो बैठक जसको कुनै विधि, प्रक्रिया, मूल्य र निष्कर्ष हुँदैन, त्यसका लागि नागरिकको पैसा किन खर्च गर्ने ? जाबो एउटा बैठक आफ्नै खर्च र प्रबन्धनमा गर्ने क्षमता नेकपाले गुमाइसकेको हो र ?
के नागरिकले यी प्रश्न बारम्बार उठाइरहँदा पनि जवाफ दिन आवश्यक नठान्ने यो सरकार नागरिकप्रति उत्तरदायी छैन ? के यो देशका प्रतिपक्षी दलहरु सरकारी ज्यादतीका विरुद्ध आवाज उठाउने नैतिक हैसियत राख्दैनन् वा उनीहरुले त्यो धरातल गुमाइसकेका छन् ? वा यो राजनीतिक नैतिकताको प्रश्नबारे उत्तर दिन सरकारले आफ्नो न्यूनतम् नैतिकता पनि गुमाइसकेको छ ?
सरकार र सरोकारवालाहरुले जवाफ दिऊन् । नत्र नागरिकले जवाफ दिने अवस्थामा सिर्जना भयो भने सरकार र सत्तारुढ दलले धेरै कुरा गुमाइसकेको हुनेछ ।
कोरोना कहरका बीच विहारमा विधानसभाः कन्हैयाको के हुन्छ ?
राजनीति, विचार, विशेष
ढँटुवा ट्रम्पसँग वाइडनले यसरी बहस गर्दा राम्रो होला
डा. केसीलाई नेविसंघको साथ, तत्काल माग पुरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण
त्यो विहारी शासन र यो ओलीराज
सांसदहरुको आरोप- बन्दीको शव व्यवस्थापनमा कमजोरी भयो
नेपाल–चीन सीमा प्रश्नमा सरकारको टिप्पणीबारे कांग्रेसको ध्यानाकर्षण
‘सीमा विवादबारे मन्त्रालय-मन्त्रालयबीच अनावश्यक विवाद गराउन खोज्नुको औचित्य छैन’
कोरोनामुक्त भए कोइराला
‘पार्टी प्रवेश’ होइन, ‘पार्टी त्याग’को लहर
नेपाल-चीन सीमा क्षेत्रमा कुनै समस्या छैनः प्रवक्ता ज्ञवाली
राष्ट्रिय निर्देशन ऐनलाई परिमार्जन गर्न सरकारलाई निर्देशन
तत्काललाई बन्द भयो वामदेव सरकारमा जाने बाटो, सर्वोच्चले दियो यस्तो आदेश
‘पाखे’ भनेको होइन, परिचालित तत्वहरुले दुष्प्रचार गरेः प्रेस सल्लाहकार थापा
चीनलाई भूमि अतिक्रमण नगर्न युवाहरुको चेतावनी, काठमाडौंमा प्रदर्शन
नेपालमा कृषि कर्म गर्ने हरेक नागरिकले अब निराश हुनु पर्दैनः मन्त्री भुसाल
आनन्दमोहनको बेञ्चमा वामदेवविरुद्धको मुद्दा
देशलाई अनिष्टबाट बचाउन ओलीसँग सम्झौता गरेको प्रचण्डको खुलासा
काँग्रेस सभापतिको दाबीबाट पछि हट्दै रामचन्द्र !
मन्त्रीमा भागबण्डा मिल्यो, मुख्यमन्त्रीमा अझै लफडा
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा ‘नयाँ क्षेत्रफल’सहितको पुस्तक वितरण रोकेका छौंः मन्त्री पोखरेल
उत्तर कोरियाली नेता किमले माफी मागे
सिओल, १० असोज । उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता किम जोङ उनले माफी मागेका छन् । दक्षिण कोरियाका एक अधिकारीको हत्या गरेको घटनाको...
जोखिम कायम छ, विद्यालय नखोल्नुहोस्ः शिक्षामन्त्री पोखरेल
काठमाडौँ, १० असोज । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले कोभिड–१९ को जोखिम कायमै रहेकाले केही समय विद्यालय...